महंगा कलाकारमाथि महंगो लगानी, तर जोखिम कती ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsमहंगा कलाकारमाथि महंगो लगानी, तर जोखिम कती ?
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- सिनेमा बनाउनु सामान्य कुरा रहेन । सिनेमाका लागि लगानी पनि सामान्य रकमले नहुने भयो । सिनेमाको छायांकन अगावै करोड रुपैयाँ छुट्याउँदा हुने भयो । अझ बजारमा स्वघोषित स्टारहरुलाई लिने हो भने त छायांकन अगावै करोड सकिन्छ । अहिले महंगो मानिने कलाकारमाथि यसरी नै लगानी भैरहेको छ ।
सिनेमाको कथा राम्रो बनाउने कि कलाकारको पारिश्रमिक र प्राविधिक पक्ष भन्न मत भिन्नता छ । अहिले कथामा लाख र कलाकार र प्रविधीमाथि करोड लगानी छ । जसले गर्दा सिनेमा चल्ने कुरा भगवानको हातमा मात्र पर्दछ ।
अहिले महंगा भनिएका कलाकारमाथि महंगो बजेटमा सिनेमा बनिरहेका छन् । अभिनेता अनमोल केसीमाथि निर्मात्री झरना थापाले करोडौ बजेट लगाएकी छिन् । अनमोलको पारिश्रमिक नै ४० लाख माथिको भनिएको फिल्मको बजेट २ करोड पुग्नेछ ।
निर्माता गोविन्द शाहीले लभ स्टेशन सिनेमामा पनि यसरी नै लगानी गरेका छन् । प्रदिप खड्काको शेयर पारिश्रमिकमा तयार हुन लागेको यो सिनेमाको जापान र मनाङको छायांकन सकिदा पारिश्रमिक ३ भेट्ने छ ।
निर्देशक हेमराज वीसीले अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई १५ लाख पारिश्रमिक दिए । अभिनेता प्रदिप खड्कालाई कती दिए होलान्, सजिलै भन्न सकिन्छ । सिनेमाको सबै दृश्य विदेशमा खिचिनेछ । यसैले प्रदिप र साम्राज्ञीमाथि ३ करोड भन्दा माथिको लगानी हुँदैछ ।
अभिनेता सलिनमान बनियाँलाई १२ लाख पारिश्रमिक दिएर सुरु भएको यात्रा रिलिजसम्म ३ करोड बजेट निर्माताको सकिनेछ । अब, निर्मातालाई जोगाउन मात्र पनि सलिनमानको स्टारडम धुवाधार चल्नुपर्ने हुन्छ ।
अभिनेता पल शाहमाथि पनि त्यस्तै लगानी छ । अभिनेता शाहमाथि निर्माता तथा निर्देशक सुरज सुब्बा नाल्बोले २० लाख पारिश्रमिक लिएर महंगो सिनेमा बनाउँदैछन् ।
नेपाली फिल्म अहिले कलाकारको पारिश्रमिक र उनीहरुमाथि गरिएको महंगो लगानीले जोखिमपूर्ण छ ।
प्रदिप खड्काले २५ लाख पारिश्रमिक लिएको रोज सिनेमाले देशभरबाट कति रकम कमायो भन्ने सबैलाई थाहा नै छ । अभिनेता अनमोल केसीलाई २० लाख दिएर निर्माता सुवास गिरीले बनाएको कृ सिनेमाको लगानी कती फिर्ता भयो भन्ने सोच्न घोत्लन पर्दैन । जबकी यो सिनेमाको बजेट ४ करोडको थियो । कायरामा साम्राज्ञीलाई १० लाख दिएर आर्यन सिग्देलले सिनेमा बनाएपनि यसले गतिलो पैसा उठाएन ।
यी सबै कलाकारका पारिश्रमिक महंगो भएपनि सिनेमाको कथा कमजोर थियो । जसलेगर्दा सिनेमा २ दिनपनि हलमा राम्रोसँग चलेन ।
भारतमा साढे २ सय करोडमा बनेको ठग्स अफ हिन्दुस्तान सिनेमाले १२५ करोड पनि नकमाएको उदाहरण छ । जबकी, आमिर खान र अमिताभ बच्चनमाथि निर्माताले भरोसा राखेर साढे २ सय करोड लगानी गरेका थिए ।
नेपाली स्टार कलाकारमाथि करोडौ लगानी छ । तर, त्यो लगानी उत्तिकै जोखिमपूर्ण पनि छ ।
फिल्म ‘प्रेमलीला’को पोष्टर सार्वजनिक
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – अभिनेत्री रेखा थापापछि कुनै अर्की हिरोइनको जन्म नेपाली फिल्ममा भएको छ, जो हिरोलाई चुनौती दिने आँट गर्दैछिन् । रेखा थापाले हिरो नै आफू भन्दै सिनेमामा आफूलाई नै हाबी बनाएकी थिइन् । रेखा थापाले […]